50 sano kadib dilkii Madaxweynihii Soomaaliya – GEELLE MAG
50 sano kadib dilkii Madaxweynihii Soomaaliya
Cali Axmed Posted On October 17, 2019
Waxaa 50 sano laga joogaa dilkii Allah ha u naxriistee Madaxweynihii labaad oo si dimuqraadi ah loogu doortay Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo lagu dilay Magaalada Laas Caanood 15-kii Bishii Oktoobar sanadkii 1969-kii.
Axmed Cabdi Laangare oo xiligaasi ahaa ku xigeenkii duqii Laas Caanood oo aheyd goobtii lagu dilay Allah ha u naxriistee Madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke, kana mid ahaa dadkii xiligaas goobjooga ka ahaa markii la dilayey Madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ayaa waxa uu ka warbixiyay sida uu u dhacay dilka Madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke, sheegayna in Madaxweyne Cabdirashiid lagu wargeliyay dilkiisa, wuxuuna yiri
“Waxaa la su’aalay, Cabdirashiidow ma lugugu yiri Laas Caanood baa laguwu dilaa?” ayuu yiri Axmed Cabdi Laangare, sidoo kale Axmed Cabdi Laangare waxa uu ka warbixiyay jawaabtii uu xiligaasi ka bixiyay su’aashii la weydiiyay Madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke, wuxuuna yiri
“Ilaah baa wax dila laakiin saasaa la yiri, ilaah baa wax dila ee haday taydii noqoto nin kalaa I badalayo” ayuu yiri Axmed Cabdi Laangare.
Ninka dilka Madaxweynaha geystay wuxuu ahaa nin 22 jir ah, waxaana la oran jiray Saciid Yuusuf Ismaaciil, waxaana loo yaqiinay Saciid Oorfano, wuxuuna ahaan in lagu soo dhex qariyay ciidankii Booliska ee loo diyaariyay ilaalada Madaxweynaha intuu marayey gobolada Togdheer iyo Wuqooy Bari oo uu markaasi ka yimid, kadibna Madaxweynuhu wuxuu tagay Wuqooy Galbeed, kadibna wuxuu booqasho ku tagay Laas Caanood oo markaa ka mid aheyd gobolka Togdheer, wuxuuna Saciid Yuusuf Ismaaciil Saciid Oorfano u raacayey Madaxweynaha meel walbo oo uu tago, balse wuxuu heli waayey fursad uu ku toogto Madaxweynaha.
Balse Maalin arbaco aheyd weliba xilli duhur ah, iyadoo uu la socdo Madaxweynuhu Guddoomiyihii Baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Maxamed Xuseen, ayaa Saciid Oorfano oo ay hagayaan labo nin oo ka tirsan Booliska Soomaaliya, wuxuu isla markiiba todobo xabado ku boobay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, wuxuuna ka toogtay qaarka kore ee jirkiisa, isla markiiba Madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke halkii ayuu ku geeriyooday.
Maalintaas uu dhacay dilka Allah ha u naxriistee Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxay u aheyd maalin madow Ummadii Soomaaliyeed.
Kadib markii dilkaasi uu dhacayna, waxaa meydkii Madaxweynaha loo soo qaaday Magaalada Muqdisho halkaas ayaaana lagu aasay.
Aaskii Madaxweynihii hore ee Soomaaliya kadibna, waxaa la magacaabay mas’uuliyiin sar sare oo loo igmaday in ay baaritaano qoto dheer ku sameeyaan cidii ka dambeysay dilka Allah ha u naxriistee Madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
Dadkii xiligaasi loo xilsaaray baaritaanka dilka Madaxweynahana waxaa ka mid ahaa Qareen Cabdi Faarax Baashane, Gaashaanle Xirsi Cusmaan Keenadiid iyo Gaashaanle dhexe Faarax Sugulle.
Maalin kadib Aaskii Madaxweynahana waxaa dalka afgambi ku gabsaday curiyihii dowladii kacaanka Maaxamed Siyaad Barre.
Xabadihii uu maalintaa riday Saciid Yuusuf Ismaaciil Saciid Oorfano waxay gebi ahaanba qurka qoysay Madaxweynihii labaad oo si dimuqraadi ah loogu doortay Soomaaliya iyo dimuqraadiyadii curdunka aheyd ee Soomaaliya.
Sidoo kale ciidamadii xiligaas dalka qabsadayna ee hogaaminayey Madaxweyne Maxamed Siyaad Barena waxa ay aaseen tijaabadii dimuqraadiyadda dalka, dalka Soomaaliyana waxaa u bilowday waa cusub.
Waxaa xusid mudan in dad fara badan oo Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in dilkaasi ay ka dambeeyeen Siyaasado Shisheeye oo dibadda ka timid, iyadoo weliba waqtigaasi ay jirtay loolan xoogan oo u dhaxeeyay quwadihii heer Galbeedka iyo heer Bariga oo xiligaasi ku hardamayey gacanta ku heynta wadamo badan oo ku yaallay Qaaradda Afrika.
Weli waxaa taagan su’aalaha jihooyinka badan leh ee liska weydiinayo dilkii Allah ha u naxriistee Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaarke, taas oo badashay jihadii siyaasadeed ee dalka Soomaaliya.
Xigasho: BBC Soomali
Maamulka Koofur galbeed oo lagu eedeeyay in ay si qaldan u wadaan maamul u sameynta Ceel barde